Lisitra feno momba ny lesoka sy olana momba ny rakitra PST Outlook
Home Products DataNumen Outlook Repair Lisitry ny hadisoana feno
Fahadisoana Outlook sy olana
Lisitr'ireo lesoka sy olana feno ao amin'ny fisie Files PST
4.90 / 5 (avy amin'ny vato 1,603)
Rehefa mampiasa Microsoft Outlook ianao hanokatra a rakitra fampirimana maloto (PST) manimba, hahita hafatra diso isan-karazany ianao, izay mety somary manjavozavo aminao. Noho izany, eto izahay dia hiezaka ny hanao lisitra ny lesoka rehetra mety, voalahatra arakaraka ny fahita matetika. Isaky ny lesoka tsirairay dia hilazalaza ny soritr'aretina ananany izahay, hanazava ny antony marim-pototra azy ary hanome rakitra santionany ary koa ilay rakitra apetraky ny fitaovana fanarenanay Outlook. DataNumen Outlook Repair, mba hahafantaranao tsara azy ireo. Eto ambany dia hampiasa ny 'filename.pst' izahay hanehoana ny anaran'ny fisie Outlook PST anao.
Ny rakitra xxxx.pst dia tsy fisie fampirimana manokana.
Hita ny lesoka tao amin'ilay rakitra xxxx.pst. Mialà amin'ny Outlook sy ireo rindranasa alefa mailaka rehetra, ary avy eo ampiasao ny fitaovana fanamboarana Inbox (Scanpst.exe) hamaritana sy hanamboarana ireo lesoka ao amin'ilay rakitra. Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fitaovana fanamboarana Inbox dia jereo ny Fanampiana.
Microsoft Outlook dia nisedra olana ary mila mihidy. Miala tsiny izahay noho ny fanelingelenana.
Tsy hita ilay rakitra xxxx.pst.
Tsy afaka mampiseho ny fampirimana. Tsy azo nidirana ny rakitra xxxx.pst.
xxxx.pst tsy azo idirana - 0x80040116.
Tsy azo nidirana ny rakitra xxxx.pst. Hadisoana data. Fanamarinana ny fihenan'ny cyclic.
Tsy afaka manitatra ny fampirimana. Tsy azo sokafana ireo andiana lahatahiry. Ny fisie xxxx.pst dia tsy azo sokafana.
Tsy afaka mamindra ireo entana. Tsy azo nafindra ilay entana. Na efa nifindra na voafafa, na nolavina ny fidirana.
Tsy afaka mamindra ireo entana. Tsy afaka nifindra ny entana. Nafindra na voafafa ilay voalohany, na nolavina ny fidirana.
Tsy afaka mamindra ireo entana. Tsy nahavita ny fandidiana. Ny sanda parameter iray na maromaro dia tsy mitombina.
Ny entana sasany tsy azo afindra. Na efa nifindra na voafafa izy ireo, na nolavina ny fidirana.
Outlook PST /OST miadana na tsy mamaly ny fisie.
Na dia manome fitaovana fanamboarana Inbox (Scanpst.exe) i Microsoft mba hamahana ireo olana amin'ny rakitra PST maloto, dia tsy afaka miasa amin'ny most ny tranga. Ny fitsofana dia matetika sendra olana rehefa tsy mandeha ny Inbox Repair Tool:
Ny fitaovana fanamboarana Inbox dia tsy mankasitraka ilay rakitra xxxx.pst…
Nisy lesoka tsy nampoizina nanakana ny fidirana amin'ity rakitra ity. Ampiasao ScanDisk hijerena ireo kapila misy lesoka, ary avy eo andramo ampiasaina indray ilay fitaovana Fanamboarana Inbox.
Nisy lesoka nitranga ka nahatonga ny fihenan'ny scan. Tsy nisy fanovana natao tamin'ny fisie scan.
Fitaovana fanamboarana Inbox (Scanpst.exe) mihantona tsy misy farany ary tsy manao ny fanamboarana.
Ny rakitra PST namboarin'i Inbox Repair Tool (Scanpst) dia foana na tsy misy ireo entana tadiavina.
Scanpst dia mitatitra ny "Fatal Error 80040818" rehefa manandrana manamboatra ny fisie PST.
Notaterin'i Scanpst fa «Nisy lesoka tsy fantatra nanakana ny fidirana amin'ilay rakitra. Error 0x80070570: Ny fisie na ny lahatahiry dia simba ary tsy voavaky ”.
Very data rehefa mampiasa Fitaovana fanamboarana Inbox (Scanpst.exe) manamboatra rakitra PST maloto.
Ankoatr'izay, rehefa mampiasa Microsoft Outlook ianao, dia mety hahita olana manaraka matetika ihany koa, izay azo vahana amin'ny DataNumen Outlook Repair mora foana.
Olana fisie PST be loatra (ny haben'ny rakitra PST dia mahatratra na mihoatra ny fetra 2GB).
Diso voafafa ny mailaka Outlook sy ny entana hafa.
Adinoy na very ny teny miafina na fampahalalana momba ny fidirana ho an'ny fisie PST.
Ankoatr'izay, rehefa mampiasa telefaona findainao hampifanarahana ny angona amin'ny Microsoft Outlook eo amin'ny biraonao ianao dia mety ho l koaost mailaka sy zavatra hafa noho ny lesoka fampifanarahana na lesoka amin'ny lozisialy. Amin'ny tranga toy izany dia azonao atao koa fampiasana DataNumen Outlook Repair mamerina ny lost zavatra.
Indraindray, rehefa tojo olana amin'ny Outlook ianao dia sarotra kely ny mamantatra ny tena antony. Amin'ny tranga toy izany dia azonao atao hamarino tsikelikely ny olana ary fantaro izay tsy mety amin'ny Outlook.